Gịnị Bụ The Best Chocolate na-echekwa na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ The Best Chocolate na-echekwa na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 29/02/2020)
The European Afrika na-ebe ma ama n'ihi na ya dị ịtụnanya na-atọ ụtọ chocolate. N'ezie, ọtụtụ chocoholics na-enwe njem sịnụ na ha nwere ohere nụrụ ụtọ na ụfọdụ ịtụnanya flavors n'oge ha njem. Ọ bụrụ na ị na-eme gị site Europe na-akpọ isiala nye chocolate, anyị nwere oké ozi ọma n'ihi na ị na! Save A Train ele anya na European chocolate idaha ma na-etinye ọnụ a ndepụta nke 10 kacha mma chocolate na-echekwa na Europe. Kwesịrị ị na-ahụ onwe gị na otu n'ime mba ndị a, na ị na-a agụụ maka ụfọdụ ịtụnanya chocolate, na-oge gara otu n'ime ndị a ebe. Ị gaghị-emechu ihu.
1. Best Chocolate na-echekwa na Paris – Debauve na Gallais
France bụ n'etiti ndị kasị ukwuu gosiri mba n'ihi ya chocolate. Ị na-n'aka-ahụ a otutu chocolate na-echekwa mgbe eme gị site na n'okporo ámá nke obodo. N'ezie, i nwere ike imeri na ọnụ ọgụgụ nke chocolate-echekwa ị na-ezute. Iji jide n'aka na ị na-enweta nke kacha mma Paris nwere na-enye, anyị jụrụ gburugburu maka ga-eleta chocolate ụlọ ahịa na Paris. Ọtụtụ zara na ọ nwere na- Debauve na Gallais. Nke a mma ụlọ ahịa na-abụghị nanị ndị kasị ochie na obodo, ma ọ bụ a kpochapụwo. Ọ e mepere 1800s na kere na-atọ ụtọ chocolate maka ọha na eze kemgbe. N'ezie, na ndị oge ahụ mgbe ha mepere na ha ghọrọ ndị chocolate suppliers maka French Court na Napoleon. Ọtụtụ oké French isi ụtọ ha chocolate, na otú i nwere ike isi.
Mgbe ọ na-abịa Italy, ọtụtụ banyere Viziovirtù dị ka a ga-eleta ebe chocolate hụrụ. Na-ewu ewu ụlọ ahịa dị na center nke Venice na bụ a chocoholics nrọ. Na ihe niile dị shop bụ ejiri mee na nke kacha mma Efrata dị. Ha na-enye a zuru okè ngwakọta nke ịrịba masịrị ya na obi ụtọ Venetian ikuku. N'ezie, ha na nkà ihe ọmụma gburugburu chocolate bụ na-adọrọ mmasị. Ha na-agbaso omenala ụzọ na craft nile site n'aka. Ikpokọta na na nanị ndị kasị mma Efrata, na i nwere a ga-eleta ebe na obi nke Venice.
3. Best Chocolate na-echekwa na Amsterdam – Vanroselen
The Netherlands bụ na-emekarị bụghị n'ebe na-abịa n'uche mgbe ị na-eche chọkọletị. Otú ọ dị, ọ bụ ka a akwa ebe nụrụ ụtọ ụfọdụ ndị kasị mma chọkọletị na ụwa. Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-echekwa bụ na Amsterdam. Vanroselen na-a ga-eleta ntụpọ maka onye ọ bụla na-achọ na-agbalị ụwa klas chocolate. Ihe nile ha ụlọ ahịa dị ejiri, combining chocolate with various fruits and herbs to create unique and mouth watering treats.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem site Luxembourg, eme ka n'aka na-akwụsị a fabulous chocolate store na aghọwo a n'ụwa nile aha. Otú ọ dị, mbụ bụ chocolate House nke Luxembourg na-emi odude na ncherita-Grand Ducal Obí, na na ọ bụ n'ụlọ ka ụfọdụ ndị kasị mma chocolate kere n'ụwa. Odude na-esote eze, ị pụrụ ijide n'aka ha na-enye nanị ndị kasị mma. Enwe a eluigwe na ahụmahụ na ụfọdụ ndị kasị mma flavors na ụwa.
5. Best Chocolate na-echekwa na Vienna – Xocolat Manufaktur
Ọ bụrụ na ị-eji a mkpagharị site bara ọgaranya district nke Hietzing na Vienna, ịkwụ ụgwọ a nleta Xocolat Manufaktur. Na nke a mma ụlọ ahịa, i nwere ike ịhụ ụfọdụ ndị kasị mma chocolate na Europe. Ọkọnọ na iko casing niile ịhụ, ị pụrụ ịhụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nụchara iche chocolate na mba. I nwere ike ịga n'ebe na-enweta chocolate ma ọ bụ ịga a ogbako na ịmụta a nta banyere nkà nke na-eme ka chocolate.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a shop na bụ ọgaranya akụkọ ihe mere eme na uto, ahụ anya ọ gara n'ihu karịa Erich Hamann na West Berlin. Ihe abụọ na-eme nke a store kwụpụta. Firstly, ọ bụ ịtụnanya akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahịa na ya. Ọ ụbọchị laghachi 1928, na ọ dị na a Bauhaus style ụlọ ọbọhọ agha ụwa nke abụọ. Nke abuo, ọ bụ ha nsọpụrụ ọdịnala na oké uto. Ha ka nwere na mbụ Ntụziaka si echekwa oghere na ịhụnanya na-elekwasị anya na ọchịchịrị chocolate. Otú ọ dị, ọbụna ha na-enye na-acha ọcha chocolate iche iche ndị ọzọ flavors. Ha chocolate n'ụgbụgbọ bụ okwu nke obodo, wee jide n'aka na-agbalị ya ma ọ bụrụ na ị gaa ahịa.
7. Best Chocolate na-echekwa na Bruges – The Chocolate Line
Belgium bụ n'etiti ndị kasị mma mgbe ọ na-abịakwute art nke na-eke chocolate. Eje ije site na Belgium obodo, ị ga-ahụ a otutu atọ ụtọ morsels na ngosi. Otu n'ime ebe kasị mma na-egwu chocolate bụ The Chocolate Line na Bruges. The ụlọ ahịa bụ a ga-eleta onye ọ bụla na-arụ a ezi òkè chocolate. E nwere ọtụtụ omenala flavors na a otutu fun na ibuo chọkọletị ịhọrọ site na. Gịnị na-eme ndị Chocolate Line kwụpụta bụ ha na usoro nke na-eme ka ndị chocolate. Ha na-eme chocolate site na agwa na pụrụ iche ngwá maka egweri na agwakọta chocolate. Oge ọzọ ị na-na Bruges, na-oge na-enwe ịtụnanya flavors na enwekwa ahụmahụ na The Chocolate Line.
Switzerland bụ ma ama n'ihi na ya chocolate. N'ezie, anyị nwere ike ikwu na mmiri ara ehi chocolate ke Switzerland. Ozugbo ị ga-esi na mba, ị ga-achọpụta na chocolate bụ n'ebe nile. Fọrọ nke nta n'ebe nile ọ bụla ị na-aga jupụtara chocolate echekwa àjà a aru eri. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta nke kacha mma Switzerland nwere na-enye, Ọtụtụ ndị kweere na Max Chocolatier bụ zuru okè n'ebe gaa. Ọ bụ a local mmasị, na maka a ezi ihe mere. Ha na-eji n'elu mma Efrata na-emepụta ụfọdụ ndị kasị mma chocolate na Switzerland. Ha nwekwara a pụrụ iche, anọ kara menu nke na-eme n'oge a kara aka chocolate flavors. Na ngwụcha, ị ga-enwe a dịgasị iche iche nke ndị na-amasị, dabere na mgbe ị gara na ndị ụlọ ahịa.
Zurich ka Lucerne Ụgbọ oloko
Bern ka Lucerne Ụgbọ oloko
Geneva ka Lucerne Ụgbọ oloko
Konstanz ka Lucerne Ụgbọ oloko
9. Best Chocolate na-echekwa na Budapest – chocolate Rozsavolgyi
Hungary bụ a zoro ezo mkpuru maka chocoholics. Ha na-eme a dịgasị iche iche nke ịtụnanya desserts, na ha chọkọletị bụ ahụkebe. A ga-eleta na-enwe ịtụnanya chocolate bụ chocolate Rozsavolgyi na Budapest. Ọ na-enye ọtụtụ nke-atọ ụtọ emeso na, ọtụtụ ihe, ịtụnanya chocolate kere. Ha chocolate enweta mba ama na ha chocolate bonbons, na mgbe ị na-agbalị ka ha, o doro anya ihe mere. The ọgaranya, aesthetically ẹnamde morsels eluigwe. Kwụsị site ma ọ bụrụ na ị na- ejegharị ejegharị na Budapest.
Ikpeazụ anyị na ndepụta nke 10 Best Chocolate na-echekwa na Europe bụ Sprungli. Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe a na na dunyere ndị oge gboo echiche nke Swiss chocolate, anya ọ gara n'ihu karịa Sprungli na Zurich. The ahịa e mepere 1859 ma mee ịtụnanya, handcrafted chocolate kere kemgbe. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta oké chocolate emepụta si kasị mma nke Efrata, nleta Sprungli.
Na ngwụcha, Europe bụ ihe na-akpali akpali ebe onye na-achọ ndị kasị mma chocolate na kasị mma chocolate na-echekwa ma ọ bụ dị nnọọ a choco ofufe.
Ị dị njikere na-enweta a chocoholics paradise n'oge gị ọzọ njem site Europe? Book A Train Ticket gị chọrọ ebe na atọ niile ha nwere na-enye.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Chocolate na-echekwa na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chocolate-stores-europe/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / tr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#candyshop #ụlọ ahịa chocolate europetravel Foodie
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali